डन्डीफोर किन आउँछ र कसरी हटाउने? - HKNepal.com - First Nepali Internet Magazine Hong Kong | एचकेनेपाल डट कम
डन्डीफोर किन आउँछ र कसरी हटाउने?
१९ कार्तिक २०७२, बिहीबार ११:२६
डन्डीफोरका चारवटा तह हुन्छन्। स्वास्थ्य विज्ञानले ग्रेड एकदेखि चारसम्म यसको वर्गीकरण गरेको छ। डन्डीफोरको पहिलो चरण …ब्ल्याक हेड’ हो। काला स–साना गिर्खा अनुहारमा भएको अवस्थालाई नै ब्ल्याक हेड मानिन्छ। चौथो चरणमा पुगेको डन्डीफोरमा पीप र रगत नै जमेको हुन्छ। डन्डीफोर आइसकेपछि त्यसमा ब्याक्टेरियाको इन्फेक्सन हुने भएकाले यसले छालालाई थप हानि पुर्यानउँछ।
अनुहार, छाती, कुम र कहिलेकाहीँ ढाडमा पनि डन्डीफोर आउँछन्। कपडाले ढाक्ने भागमा डन्डीफोर आउँदा खासै फरक पर्दैन। तर, अनुहारमा डन्डीफोरले दाग, धब्बा र स–साना खोपिल्टा छोडेर जाने भएकाले यो धेरैको पिरलो बन्ने गरेको छ।
नागरिक दैनिकमा डा. धर्मेन्द्र कर्ण भन्छन्- डन्डीफोरले बिगारिसकेको अनुहारको छालालाई सफा बनाउन औषधि र क्रिमले मात्र काम गर्दैनन्। यसका लागि लेजर थेरापी गर्नुपर्छ। डन्डीफोरका कारण दाग बसेको छालालाई मेसिनको सहायताबाट हटाउने विधि प्रयोग गरी उपचार गर्नुपर्छ। यो विधिमा दाग बसेको छालाको बाहिरी तहलाई हटाउने र नयाँ छाला पलाउने अवस्था सिर्जना गरिन्छ। यसो गर्दा समेत अनुहारको शतप्रतिशत दाग भने जाँदैन। केही कम गर्न सकिन्छ। डन्डीफोर आउन थालेपछि त्यसलाई कोट्याउने तथा निचोर्ने नगरी विशेषज्ञ चिकित्सकलाई देखाएर थोरै सावधानी अपनाउँदा अनुहारमा आउने समस्याबाट बच्न सकिन्छ।
रसुवा बस दुर्घटनामा मर्नेको संख्या ३६ पुग्यो
हाई ब्लड प्रेसर कसरी कन्ट्रोल गर्न?
Trending Now : हङकङमा थप ८९ जनामा कोरोना संक्रमण, १ जनाको मृत्यु....